Overview - Ningbo De-Shin Industrial Co., Ltd
In pedyo co-kugadzwa nevanhu makasitoma edu uye kukura erosive nokuveza michina, tinogara chinja uye kunatsiridza risanyatsobuda kukudziridza matsva chigadzirwa mitsetse, akadai phosphor yendarira waya nokuda bhurasho kugadzira bhizimisi uye annealed zingi zvemapuranga waya anatsiridze machine kunyatsoshanda. Uye nzira yokushanda yose mudonzvo mutengi vaifarira anovimbisa basa dzinogutsa kune vamwe vedu.
Kurota yedu kukura vatengi edu. Zvichitevera pfungwa iyi, tinotarisira kuva nyanzvi uye musika mutungamiri ari kutsvakurudza uye kukura zvakarurama chiwanikwa waya izvo kubatsira vatengi kukura uye kuwedzera zvavo musika mugove. With yepamusoro mureza, vakawanda yemakwikwi mutengo, nenguva pakukurukura, hwakakwana pasuru, simba R & D rutsigiro uye basa dzinogutsa, Ningbo De-Shin zvinofanira kuva zvako akakodzera EDM waya nokutengesa.